M Diary Channel – Page4– Local and Sport News
ရလဒ်ဆိုးတွေနဲ့ဆက်တိုက်ရင်ဆိုင်နေရပေမယ့် ရာထူးကအထုတ်ခံရဖို့မရှိသေးတဲ့ ဆိုးလ်ရှား
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းဟာ လက်စတာနဲ့ပွဲမှာရှုံးနိမ့်ခဲ့တာအပါအဝင် ပြိုင်ပွဲစုံမှာစိတ်ပျက်စရာရလဒ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပေမယ့်လည်း နည်းပြဆိုးလ်ရှားကို ဘုတ်အဖွဲ့က ရာထူးကနေထုတ်ပယ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိသေးဘူးလို့ သတင်းထွက်နေပါတယ်။ ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ လက်စတာကို (၄-၂)ဂိုးနဲ့ရှုံးနိမ့်ခဲ့တာကြောင့် အမှတ်ပေး ဇယားထိပ်ပိုင်းက အသင်းတွေနဲ့အမှတ်ကွာဟမှု ပိုများနေပြီဖြစ်သလို ပရီးမီးယားလိဂ်
Articles October 17, 2021 October 17, 2021
သရဲနီကွင်းလယ်လူကို ခေါ်ဖို့ စိတ်ဝင်စားနေပြန်တဲ့ ဘာစီလိုနာ
လာလီဂါထိပ်သီးဘာစီလိုနာအသင်းဟာ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ ဆားဘီးယားဝါရင့်ကွင်းလယ်လူမာတစ်ကို ခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့ သတင်းထွက်နေပါတယ်။ အသက်(၃၃)နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်သူမာတစ်ဟာ ယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့(၁၈)လသာ စာချုပ်သက်တမ်းကျန်ရှိတော့ပြီး ဘာစီလိုနာအသင်းက သူ့ကို လာမယ့်နှစ်၊နွေရာသီကျရင် ခေါ်ယူဖို့ပစ်မှတ် ထားနေတာပါ။ ဘာစီလိုနာအသင်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့နေရွာသီတုန်းက
သရဲနီပစ်မှတ် ချူအာမန်နီအတွက် ပေါင်သန်း(၅၀) အလိုရှိနေတဲ့ မိုနာကို
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းဟာ အနာဂတ်မသေမချာဖြစ်နေတဲ့ ကွင်းလယ်လူပေ့ါဘာနေရာကို အစားထိုးဖို့အတွက် မိုနာကိုအသင်း လူငယ်ကစားသမား ချူအာမန်နီကိုခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေပြီး တခြားပရီးမီးယားလိဂ် ထိပ်သီးအသင်းတွေဖြစ်တဲ့ လီဗာပူးလ်၊ မန်စီးတီးအသင်းတို့နဲ့အပြိုင်ကြိုးပမ်းရဖို့ ရှိနေပါပြီ။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်၊ ဇန်နဝါရီတုန်းက ဘော်ဒိုးအသင်းကနေ
လက်စတာနဲ့ပွဲက ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ခြေစွမ်းကို ဝေဖန်လိုက်တဲ့ ဂယ်ရီနဗီးလ်
Sky Sports ရုပ်သံမှာ ဘောလုံးပွဲသုံးသပ်သူအဖြစ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဂန္ထဝင်ကစားသမားဂယ်ရီနဗီးလ်ဟာ လက်စတာ အသင်းကို (၄-၂)ဂိုးနဲ့အရှက်တကွဲရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ပွဲက မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် အသင်းရဲ့ခြေစွမ်းအပေါ် ဝေဖန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ ဂရင်းဝုဒ်ရဲ့ဂိုးနဲ့ လက်စတာအသင်းကို ဦးဆောင်နိုင်ခဲ့ပေမယ့်
“OLE OUT” လို့ အော်နေတဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အသံကိုမကြားနိုင်လောက်အောင် ဂလေဇာမိသားစု နားပင်းနေတာလား?
ဖိအားများနှင့်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နည်းပြအိုလီဂန်းနားဆိုးလ်ရှားဟာ အသင်းရဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းဆက်တိုက်ဆိုးရွားနေပေမယ့်လည်းအနာဂတ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး တစ်စုံတစ်ရာတွေးပူရန်မရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ မနေ့ညတုန်းကလက်စတာကို၄-၂ဂိုးဖြင့် ရှုံးနိမ့်ခဲ့မှုနဲ့အတူယူနိုက်တက်ရဲ့အိပ်မက်ဆိုးမှာညတာဆက်ရှည်ခဲ့ရပါတယ်။ ၎င်းတို့ဟာယင်းရှုံးပွဲကြောင့်ထိပ်ဆုံးလေးသင်းစာရင်းမှာဆင်းပေးလိုက်ရပြီး အမှတ်ပေးဖလားအတွက်စိန်ခေါ်နိုင်ရန်တဖြည်းဖြည်းဝေဝါးလာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် The Athletic ရဲ့ဖော်ပြချက်အရမန်ယူချက်စတာယူနိုက်တက် ဘုတ်အဖွဲ့ဟာအိုလီဂန်းနားဆိုးလ်ရှားအပေါ်တွင်အပြည့်အဝယုံကြည်နေကြဆဲဖြစ်ပြီး ရာထူးမှထုတ်ပယ်ရန်လုံးဝမစဉ်းစားသေးကြောင်းသိရပါတယ်။ ဒါတင်မကသေးပါဘူး။မန်ယူဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များဟာဆိုးလ်ရှားရဲ့လက်အောက်တွင် အသင်းမှာ
မိမိဆုံးဖြတ်ချက် မှားယွင်းခဲ့ကြောင်း လက်စတာနဲ့ပွဲအပြီးမှာ ဆိုးလ်ရှား ဝန်ခံသွားခဲ့
လက်စတာအသင်းကို အဝေးကွင်းမှာ (၄−၂) ဂိုးဆိုတဲ့ ရလဒ်နဲ့ ဂိုးပြတ် အရေးနိမ့်ခဲ့ပြီးနောက် ပရီးမီးယားလိဂ် (၃) ပွဲဆက်တိုက် နိုင်ပွဲပျောက်ခဲ့တဲ့ မန်ယူအသင်းရဲ့ အခြေအနေဟာ အတော်လေး စိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့
အကြာကြီးနေမှ ဂိုးပြန်သွင်းနိုင်ပေမယ့် မပျော်ခဲ့ရတဲ့ ရက်ရှ်ဖို့ဒ်ရဲ့ ပွဲပြီးပြောစကား
မနှစ်က နိုဝင်ဘာမှာ လက်စတာအသင်းနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့စဥ်က ပခုံး ဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့တဲ့ ရက်ရှ်ဖို့ဒ် ဟာ ယခုရာသီ မစတင်ခင်မှာတော့ ၎င်းရဲ့ ကာလရှည် ပခုံးဒဏ်ရာကို ခွဲစိတ်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ
လက်စတာ နဲ့ပွဲစဉ်က ပြောစရာတွေ . . .
ကင်းပါဝါ မှာ အိမ်ရှင် လက်စတာ ကို ယူနိုက်တက် တို့ ၄-၂ နဲ့ ရှုံးနိမ့် ခဲ့ပြီး တစ်ဦးချင်း ခြေစွမ်းတွေသာမက အသင်းလိုက် ကစားပုံမှာပါ
Articles October 17, 2021 October 18, 2021
” သရဲနီတွေရဲ့ခြေစွမ်းက တစ်ရာသီလုံး အနုပ်စုတ်ကုပ်စုတ်ဖြစ်နေတယ် ” ဂယ်ရီနဗီးလ်
နည်းပြဆိုးလ်ရှားရဲ့အသင်းဟာ ချန်ပီယံဆုတွေစိန်ခေါ်နိုင်ဖို့အတွက် သာမာန်ကောင်းတာရဲ့အဆင့်တောင် မရှိဘူးလို့ မန်ယူနောက်ခံလူဟောင်း ဂယ်ရီနဗီးလ်က အပြင်းအထန်ဝေဖန်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ မန်ယူဟာ ပြီးခဲ့တဲ့စနေညက အဝေးကွင်းမှာ လက်စတာကို ၄-၂ ဂိုးနဲ့ရှုံးနိမ့်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ယူနိုက်တက်အနေနဲ့ အသင်းမှာ
“ဒီနေ့ပွဲရဲ့ အရှုံးရလဒ်က ကျွန်တော်တို့အတွက် ထိုက်တန်ပါတယ်” – ပေါ့ဘာ
မန်ယူအသင်းဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဥ် (၈) အဖြစ် မနေ့ညက ကစားခဲ့တဲ့ လက်စတာအသင်းနဲ့ အဝေးကွင်းပွဲစဥ်မှာ (၄−၂) ဂိုး နဲ့ အရေးနိမ့်ခဲ့ရပါတယ်။ အိမ်ကွင်းမှာ နှစ်ပွဲဆက်တိုက်
အသင်းဟောင်း အတ္တလန်တာကို လျှော့မတွက်ဖို့ အသင်းဖော်တွေကို သတိပေးလိုက်တဲ့ အာမက်
အင်္ဂါနေ့ည နောက်ဆုံးရ ယူနိုက်တက်သတင်းများ
သရဲနီနည်းပြရာထူးအတွက် ကွန်တီ စောင့်မျှော်နေဆဲ . . .
၂၀၀၉ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် Boxing Day ပွဲစဉ်ကစားရမှာမဟုတ်တဲ့ သရဲနီ
ကွင်းလယ်လူတစ်ဦးမခေါ်ပေးခဲ့လို့ ယူနိုက်တက်ဘုတ်အဖွဲ့ကို မကျေမနပ်ဖြစ်နေတဲ့ ဆိုးလ်ရှား